Loharano vitsivitsy ho an'ny photoshop maimaim-poana tanteraka | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | lamina, borosy, dia midika hoe, Textures
Photoshop dia iray amin'ireo fitaovana rindrambaiko matanjaka indrindra eo amin'ny lafiny fanovana sy fanodinkodinana sary. Izany no antony isian'ny loharanom-pahalalana maro karazana azontsika sintonina. Fa noho izany dia mila mahita azy ireo aloha ianao.
Creativos dia manome an'ireto loharanom-pahalalana an'arivony ireto amin'ny alàlan'ny lahatsorany, mitondra antsika hanakaiky ireo tranonkala an-tapitrisany izay ao amin'ny google fa tsy izay tsy manana dokambarotra be eo amin'ny tsena. Androany dia hametraka fitaovana tsy manam-petra ho fanandramanao izahay.
Famerenana ireo tranonkala rehetra, tsirairay avy amin'ireo loharano ireo mahatratra ny andro famoahana azy ireo izy ireo ankehitriny. Fantatray fa lafo ny fitazonana tranokala ary raha mitsidika an'ity lahatsoratra ity ianao amin'ny fotoana tsy misy azy ireo dia mety noho ny antony maro samihafa. Iray amin'izy ireo ny fianjeran'ny rohy amin'ny tranokala fitehirizana.
Ka raha tsy ho azonao atao ny misintona azy dia mamporisika anao izahay hijery pejy hafa foana, saingy antenaina fa haharitra ela izany.
1 Andao atomboka amin'ny borosy
2 Araho ny lamina
Andao atomboka amin'ny borosy
Ny fitaovana quintessential ho an'ny mpamorona izay manomboka amin'ny rangotra dia ny borosy. Izany no antony hanompoan'ireo tranonkala ireo anao amin'ny tetikasanao samihafa.
Borosy 25 antsoina hoe techie
Borosy 21 napetraka setroka
Araho ny lamina
Lamina efa nomanina mialoha mba hanatanterahana ny asanao amin'ny fomba haingana sy haingana kokoa. Ireto misy ohatra maromaro momba ny modely sasany.
Fomban'ny modely taratasy japoney
Isika rehetra dia tia voninkazo, ireto misy vitsivitsy lamina voninkazo handravaka ny volavolanao.
Lohahevitra iray izay manome ny fahatsapana ho ao anaty ririninamanga, lamina
Modely tsy misy loko, in mainty sy fotsy
Ary hamita: Lamina 498 izay angonina eto amin'ity habakabaka ity. Amin'ny maha subsection ahy, raha tsy hiteny aho hoe eto dia tsy dinihina daholo izy ireo, noho ny tsy fahaizan'ny fotoana. Mazava ho azy fa tena miasa ny sasany.
Azo antoka fa maro amin'ireo no fantatrao fa ny hafa kosa azo antoka fa tsy, raha manompo anao izy ireo dia mizara azy ireo mba hahafahan'ny tsirairay mankafy ireo tombony ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Loharano vitsivitsy ho an'ny photoshop maimaim-poana